Miyuu Sergio Ramos Abaal Marinta Gool Dhalinta La Liga Ee Pichichi Trophy Uu Messi Ka Joojin Karaa Oo Uu Karim Benzema Ku Wareejin Doonaa? - Gool24.Net
Miyuu Sergio Ramos Abaal Marinta Gool Dhalinta La Liga Ee Pichichi Trophy Uu Messi Ka Joojin Karaa Oo Uu Karim Benzema Ku Wareejin Doonaa?
Karim Benzema ayaa haysta rekoodh boqolkiiba boqol ah oo uu goolal ugu badalay dhamaan 10 kii rekoodhe ee uu kooxdiisa Real Madrid u soo tuuray muddadii uu kooxda joogay, laakiin markastaba waxa uu ahaa mid ay ka horeeyaan Cristiano Ronaldo iyo Sergio Ramos.
Iyada oo Real Madrid qarka u saaran in ay ku guulaysato koobka horyaalka La liga waxa uu Sergio Ramos heli karaa fursad uu Karim Benzema uga caawin karo in uu Lionel Messi ka hor joogsado abaal marinta gool dhalinta La Liga ee Pichichi Trophy oo uu Messi iska soo yeeshay sanadihii ugu danbeeyay.
Ramos And Benzema
Karim Benzema ayaa dhaliyay rekoodhihii kooxdiisa ee kulankii Alaves waxayna Real Madrid si joogto ah u helaysaa rekoodhayaal dhamaan kulamadii ugu danbeeyay taas oo keenaysa in haddii Ramos ka tanaasulo qaadashada rekoodhayaasha uu Benzema sare ugu soo kici karo.
Karim Benzema waxa uu soo dhaliyay 18 gool oo horyaalka La Liga ah intii uu xili ciyaareedkani socday laakiin haddii uu qaadan lahaa dhamaan rekoodhayaashii uu Sergio Ramos tuuray oo uu dhalin lahaa waxa uu hadda gool dhalinta La Liga hogaanka ku hayn lahaa 24 gool.
Lionel Messi ayaa hadda gool dhalinta La Liga ee tartanka abaal marinta Pichichi Trophy waxa uu ku hogaaminayaa 22 gool laakiin shan gool oo ka mid ah waxa uu Messi ku soo dhaliyay rekoodhayaal.
Laakiin waxaa la sugayaa haddii Sergio Ramos uu dhamaan rekoodhayaasha kooxdiisa Real Madrid lagu abaal mariyo uu ku wareejin doono Karim Benzema kulamada hadhsan si uu uga caawin karo in uu markii ugu horaysay ku guulaysan karo abaal marinta uu Messi soo yeeshay ee Pichichi Troph.
Real Madrid waxaa u hadhsan 3 kulan oo La Liga ah halka Barcelona ay u hadhsan yihiin laba kulan oo kaliyi waxayna tani la micno tahay in Karim Benzema uu heli karo fursad uu ku soo yarayn karo farqiga goolasha ee isaga iyo Messi u dhexeeya haddii uu caawin ka helo Ramos.
Afar gool ayuu Karim Benzema u baahan yahay si uu gool dhalinta Messi u soo gaadhi karo waana haddii aanu Messi sii joogtayn difaacashada abaal marinta Pichichi Troph laakiin kulamada uu Benzema haysto ayaa hadda ka badan inta uu Messi fursad u haysto inkasta oo uu xidiga reer Argentina afar gool isku ilaalinayo.
Real Madrid iyo Juventus ayaa xili ciyaareedkan ah kooxaha 10 rekoodhe ama ka badan lagu abaal mariyay shanta horyaal ee Yurub ugu waa wayn ee haddana dhamaantood goolal u badalay waxayna Madrid ka mid tahay kooxaha La liga ee rekoodhayaasha ugu badan soo helay xili ciyaareedkan.
Waxa kale oo Benzema caawin karta in Setien uu shaaciyay in Lionel Messi uu daalan yahay oo uu nasasho u baahan yahay kadib markii uu si joogto ah u soo ciyaarayay dhamaan kulamadii La Liga ee intii xili ciyaareedka lagu soo laabtay.
Si kastaba ha ahaatee, in Karim Benzema uu ilaa maalinta ugu danbaysa ku tartami karo abaal marinta gool dhalinta La Liga ee Pichichi Troph waxay si wayn ugu xidhnaan doonta deeqsinimada iyo caawinta uu ka heli doono Sergio Ramos ee rekoodhe tuurista.